महिलाहरू कस्ता पुरुष मन पराउँछन् ? — Imandarmedia.com
महिलाहरू कस्ता पुरुष मन पराउँछन् त भन्ने प्रश्न आफैंमा जटिल छ किनभने संसारमा कसैको पनि रुचि एकआपसमा ठ्याक्कै मिल्दैन । तापनि केही त्यस्ता साझा मापदण्ड हुन्छन् जुन धेरैलाई मन पर्ने किसिमको हुन्छ । यहाँ त्यही आधारमा महिलाहरू कस्ता पुरुषलाई रुचाउँछन् त भन्ने जिज्ञासाको उत्तर पहिल्याउने प्रयास गरिएको छ ।
कतिपय सामान्य कदकाठीका पुरुषहरू पनि महिलाका प्रिय पात्र बनिहेका हुन्छन् भने कतिपयसँग महिलाहरू दूरी बनाइराख्न चाहन्छन् । कतिपय पुरुष सदैव आकर्षक महिलाहरूबाट घेरिएर रहन्छन् र आफूसरहका अन्य पुरुषका तुलनामा महिला साथीसँग बढी खुला रूपमा जिउँछन् । आखिर त्यस्तो के छ जसले महिलाहरूलाई पुरुषप्रति आकषिर्त तुल्याउँछ ? कस्ता पुरुष महिलाहरूका रुचिभित्र पर्छन् ?
बुद्धिमत्तापूर्ण: महिलाहरू बुद्धिमान् पुरुषसँग छिटै प्रभावित हुन्छन् किनभने उनीहरू त्यस्ता पुरुषसँग हरेक कुराको जवाफ हुन्छ भन्ने ठान्छन् । उनीहरू त्यस्ता पुरुषहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइने भएकाले पनि बढी मन पराउँछन् ।
बुद्धिमान् पुरुषहरू घन्टौंसम्म झर्को नलाग्ने गरी रमाइला कुराकानी गर्न सक्छन् कारणस्वरूप महिलाहरूको मन पग्लन्छ । बुद्धिमान् पुरुषहरूलाई के थाहा हुन्छ भने सम्बन्ध कायम राख्नका लागि बुद्धिमत्ताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ त्यसैले उनीहरू महिलाहरूसँगको सम्बन्धमा यस्तो खुबीको प्रयोग गर्छन् र उनीहरूकोमन जित्छन् ।
महिलाहरूलाई आफ्नो व्यवहारमार्फत् विशेष सम्मान दर्शाउन प्रयास गर्ने यस्ता विचारशील पुरुषलाई महिलाहरू पार्टनरका रूपमा औधि मन पराउँछन् । यस्ता पुरुषहरू हरेक काम गर्नुअघि यसमा आफ्नो अगाडिका महलिालाले के सोच्ने हुन् भन्ने कुरा विचार पुर्‍याउँछन् ।
रोमान्टिक स्वभाव: रोमान्टिक पुरुषहरू क्लासिक रोमान्समा बढी विश्वास राख्छन् । उनीहरू महिलाका लागि चकलेट ल्याउन, फूल दिन तथा उनीहरूका साथ क्यान्डल लाइट डिनर गर्न रुचाउँछन् ।
उनीहरू आफ्ना पार्टनरलाई आफूले दिनमा कतिपटक उनीहरूका बारेमा सोचियो, आफूलाई उनीहरूका केकस्ता व्यवहार एवं हाउभाउले लोभ्याउँछन् भन्नेजस्ता कुराकानी गर्छन् । यस्ता पुरुषलाई पनि महिलाहरू विछट्टै मन पराउँछन् ।
विन्दास स्वभाव : महिलाहरू निर्धक्क एवं विन्दास स्वभावका पुरुषलाई ज्यादै मन पराउँछन् । यस्ता पुरुषहरूलाई कुनै कुरामा टेन्सन हुँदैन र अरूको टेन्सन हटाउने उपाय पनि उनीहरूसँग हुन्छ । यस्ता पुरुषहरू साहसी एवं हास्यचेत भएका हुन्छन् जुन कुराले महिलाहरूलाई असाध्यै लोभ्याउँछ ।